Waan obbo Battee Urgeessaa (itti gaafatamaa qunnamtii ABO) gaafatee Burtukaan miidhagsaa didde amma Baaldaraasiif hayyamamuun hangam akka Oromoo koophaatti irratti xiyyeeffatame kan hin hubatin yoo jiraate ifa godhaaf. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWaan obbo Battee Urgeessaa (itti gaafatamaa qunnamtii ABO) gaafatee Burtukaan miidhagsaa didde amma Baaldaraasiif hayyamamuun hangam akka Oromoo koophaatti irratti xiyyeeffatame kan hin hubatin yoo jiraate ifa godhaaf.
Waan obbo Battee Urgeessaa (itti gaafatamaa qunnamtii ABO) gaafatee Burtukaan miidhagsaa didde amma Baaldaraasiif hayyamamuun hangam akka Oromoo koophaatti irratti xiyyeeffatame kan hin hubatin yoo jiraate ifa godhaaf.
Filannoon kan sobaa akka tahe alaa fi keessaa hubatame. Garuu waan kana wal hubachiisuun barbaachisaadha. Itoophiyaa keessatti yeroo seerri warra habashaatiif hojjatu Oromoof hin hojjatu.
Amma dura yeroo boordiin filannoo ibsa miidiyaaleef kennu obbo BatteeUrgeessaa gaafii dhiheessee ture. Gaafiin isaa: “Hogganoonni fi kaadhimamtoonni keenya hedduun mana hidhaa jiru. Kaadhimamtoonni keenya kun hamma manni murtii ragaa qabatamaa argatee irratti hin rmurteessinii fi shakkiidhaan qabaman kun filannoo irratti hirmaachuu hin danda’anii? Seerri Boordii Filannoo akkamitti laala?” kan jedhu ture. Burtukaan Miidhagsaa garuu battalumatti deebiin isiin kennite, “kaadhimamtoonni siyaasaa kamuu hamma qaama seeraa jala jiranitti filannoof dhihaachuu hin danda’an” kan jedhu ture.
Waanuma obbo Baattee Urgeessaa gaafate sana Baaldaraas gaafate. Kaadhimamtootni paartii Baaldaraas kan hidhaa jiran akka filannoo irratti hirmaatan jechuudha. Seerri ABO’f dalaguu dide kunoo Baaldaraasiif tole jedheet manni murtii raggasiseef. Amma kunoo boordiin filannoo (Burtukaan Miidhagsaa) kan gaafii obbo Battee Urgeessaa kufaa taasifte kaadhimamtoota Baaldaraasiif hayyumuu ibsite.
Oromoo irratti kanatu raawwatamaa jira. Xiiqeffadhu!
Oduu Cabsaa!! Tuffin Abiy ummata Oromoo Dhafi qabu danga darbbee jira!